गएराती देखि अबिरल बर्षाका कारण बल्खु डु’बानमा तस्बिरमा हेर्नुहोस्!:: Mero Desh
गएराती देखि अबिरल बर्षाका कारण बल्खु डु’बानमा तस्बिरमा हेर्नुहोस्!
Published on: २१ भाद्र २०७८, सोमबार ०५:०६
आइतबार रातिदेखिको निरन्तर वर्षाका कारण काठमाडौँ का १ सयभन्दा बढ स्थान डुबानमा परेका छन् । प्रहरीका अनुसार १३० जना बढीलाई डु’बान क्षेत्रबाट उद्धार गरिस किएको छ । अविरल वर्षाका कारण काठमाडौँको खोला छेउका सुकुम्वासी बस्ती र होचो ठाउँ डुबानमा परेको छ । डु’बान’बाट मानवीय र भौतिक क्ष’ति भएको छैन ।
गएराति टंकेश्वर, डल्लु, टेकु, तहाचल, वनस्पति चोक, नयाँ बसपार्क, परोपकार केन्द्र, माछापोखरी, गुह्येश्वरी,जोरपाटी र कालोपुललगायतका क्षेत्र डु’बानमा परेका छन् बागमती नदी बल्खु क्षेत्रको सुकुम्बासीमा पसेपछि त्यहाँ यतिबेला बिजोग छ । खोला छेउमा बनाइएका टहराहरू डुबानमा परेको छ । सडकमा पार्किङ गरेर राखिएका गाडीहरु डुबेका छन् । मानिसहरुलाई आफ्ना टहराका सामानहरु जोगाउन हम्मे हम्मे परेको छ ।
काठमाडौंमा गए रातिदेखि परेको अविरल वर्षाले जनजीव न प्रभावित भएको छ । वर्षापछि आएको भेल तथा बाढी बस्तीमा प सेको समाचार छ । बागमती नदीमा आएको बाढी नदी किनारका सुकुम्बासी बस्तीहरुमा पसेको काठमाडौं प्रहरीले जनाएको छ । यद्यपी मानवीय क्षति भने भएको छैन ।
प्रहरीका अनुसार रातभर परेको वर्षाका कारण भित्रि सहरमा ढल तथा निकासको राम्रो प्रवन्ध नहुँदा घट्टेकुलो, बानेश्वर, गुह्वेश्वरीलगायतका स्थानका केही घरमा पानी पस्नुका साथै सडक जलमग्न बनेको छ ।गुहेश्वरी आसपास मा आएको बाढीले सोमबार बिहान सडक अ’ब’रुद्ध हुन पुगेको थियो ।
वरपरका केहि घरमा समेत पानी पसेको बताइएको छ । बिहान ८ बजेपछि भने सडकमा पानीको सतह घटेर सवारी साधन सञ्चालनमा आएका छन्।